स्याउ किसानका समस्यै समस्या, बीमा पनि भएन प्रभावकारी - कृषि डेली
Home banner स्याउ किसानका समस्यै समस्या, बीमा पनि भएन प्रभावकारी
स्याउ किसानका समस्यै समस्या, बीमा पनि भएन प्रभावकारी
मुस्ताङ – मुस्ताङ जिल्लाको घरपझोङ गाउँपालिका मार्फा–२ का स्याउ किसानलाई उत्तरी हावाले चिन्तित पारेको छ । मुस्ताङी किसानका अनुसार दक्षिण दिशाबाट हावा लागे त्यति धेरै चिन्तित रहनुपर्दैन तर उत्तरी हावा बढी लाग्न थालेपछि भने उनीहरूमा चिन्ता थपिन्छ । किसान मनबहादुर हिराचन भन्नुहुन्छ, यस वर्ष पनि उत्तरी हावा बढी चलेको छ । यसले स्याउको उत्पादन राम्रो हुन दिँदैन ।
यस वर्ष बेमौसमी वर्षा र हिउँका कारण पनि स्याउको बोटमा अप्रत्याशित रूपले नयाँ रोग देखापर्न थालेको उहाँको भनाइ छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, नयाँ–नयाँ रोग देखापर्छ । के उपचार गर्ने भन्ने ठोस सुझाव प्राविधिकले समयमा दिनै सक्दैनन् ।’
वि. सं. २०६२ सालदेखि स्याउ खेती गर्दै आउनुभएका हिराचनका बगैँचामा ४० देखि ४५ वर्ष पुरानादेखि लिएर यसै वर्ष लगाइएका फुजी जातका स्याउ पनि छन् ।
स्याउका बोट सामान्यतः १२, १३ वर्ष भएपछि राम्रो उत्पादन दिन सक्ने हुन्छन् । हालै नमुना परीक्षणका रूपमा लगाइएको फुजी, गोल्डेन डेलिसियस, रेड डेलिसियस जातका स्याउले भने छिटै उत्पादन दिने भनिएकाले हिराचनले पनि ती स्याउका बोट यसै वर्ष मात्र लगाउनुभएको छ ।
शितोष्ण बागवानी विकास केन्द्र मार्फाका वरिष्ठ बागवानी विकास अधिकृत बालकृष्ण अधिकारी मुस्ताङको १२ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा हाल उत्पादनशील स्याउका बोट रहेको बताउनुहुन्छ । स्याउका बोटमा जरा कुहिने, भुवादार लाइ, सुलसुलेजस्ता कीरा लाग्ने र नर्सरीमा खुर्मे कीराको प्रकोप बढी देखिने गरेको बताउनुहुन्छ । मुस्ताङमा उत्पादित स्याउको बजार अभाव नभएकाले पछिल्ला वर्षमा स्याउ क्षेत्र विस्तार भएरहेको उहाँको दाबी छ ।केन्द्रले विभिन्न किसिमका तरकारीका मूल बीउ उत्पादन तथा बिक्री वितरण पनि गर्दै आएको छ ।
गत वर्ष केन्द्रले विभिन्न किसिमका बीउ वितरण गरेर करिब ६३ लाख राजस्व सङ्कलन गरेको पनि प्रमुख अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । केन्द्रले नयाँ स्याउका २४ हजार बिरुवा वितरण गरेको उहाँको भनाइ छ । मुस्ताङमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत स्याउ जोन पनि स्थापना भएको छ । स्याउ जोनअन्तर्गतको परियोजनालाई पनि केन्द्रले सहयोग गर्दै आएको प्रमुख अधिकारीको भनाइ छ ।
लागू हुन सकेन बीमा
स्याउ खेतीको बीमाको चर्चा भए पनि किसानले भने बीमा गरेका छैनन् । किसान हिराचन भन्नुहुन्छ, बीमाका कुरा, प्राङ्गारिक मलका कुरा सञ्चार माध्यमबाट सुनेका छौँ तर गरेका छैनौँ । के कसरी गर्ने भन्ने जानकारी पनि छैन । बीमा गर्ने प्रक्रिया निकै झन्झटिलो भएकाले पनि किसान उत्साहित नभएको उहाँको भनाइ छ ।
केन्द्रका प्रमुख अधिकारी स्याउको बोटको बीमाको लागि केन्द्रले केही आधार तय गरिदिएको भए पनि त्यो कार्यान्वयनमा आउन नसकेको र किसानले निकै झन्झटिलो मानेको बताउनुहुन्छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनाल बाली बीमाको लागि बजेट छुट्याइएको भए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको स्वीकार्नुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, पशु बीमा प्रभावकारी देखिएको छ तर फलफूल तथा अन्य बालीमा त्यति प्रभावकारी हुन नसकेको छैन । मन्त्रालयले त्यसमा गम्भीर रूपमा थप गृहकार्य गर्न जरुरी देखिएको छ ।
Previous articleगाईवस्तुुमा लाग्ने खोरेत रोगको लक्षण तथा उपचार
Next articleआलुबाटै वार्षिक १२ करोड आम्दानी